Online Marg | राजनीतिमा विना मगरको छलाङ, ससुरा प्रचण्डले आजै सुम्पिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
राजनीतिमा विना मगरको छलाङ, ससुरा प्रचण्डले आजै सुम्पिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
काठमाडौं, ४ कात्तिक । पूर्व खानेपानीमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बहारी विना मगरले नेकपा माओवादी केन्द्रमा महत्वपूर्ण छलाङ मारेकी छिन् । बुहरी विनालाई अध्यक्ष प्रचण्डले आजै ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । माओवादीमा ३२ जना केन्द्रीय विभाग प्रमुख चयन हुँदा उनी पनि परिन् ।
माओवादीभित्र विभागको जिम्मेवारीलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । माओवादीका हस्ती नेताहरुले विभागको जिम्मेवारी पाउँदा विना पनि परिन् । विनालाई खानेपानी विभागको जिम्मेवारी मिलेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद समेत रहेकी विना मगर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी हुन् ।
यता पार्टी स्कुल विभागको संयोजकमा गिरिराजमणि पोखरेल र इन्चार्जमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन्। यस्तै विपद् व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ। तथापि त्यसको संयोजकमा सूर्य सुवेदी रहने भएका छन्।
विदेश मामिला विभागमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागमा मायाप्रसाद शर्मा, श्रम तथा रोजगार विभागमा रामेश्वर राय यादव, संगठन विभागमा जनार्दन शर्मा रहेका छन्।
यसैगरी संघीय संसदीय विभागमा देव गुरुङ, समाजकल्याण विभागमा सत्या पहाडी, सरकारी तथा गरिबी निवारण विभागमा धर्मदत्त देवकोटा, सहरी विकास विभागमा देवेन्द्र पौडेल, समान्य प्रशासन विभागमा टेकबहादुर बस्नेत छन्।